ဒီစနေ၊ တနင်္ဂနွေမှာပျော်စရာပျော်စရာလေးခု ငါက Mac ပါ
နောက်ဆုံးသောကြာနေ့ပါ ဤအချိန်သည်သောကြာနေ့ဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့၎င်းသည်လမ်းခွဲရန်ဖြစ်သည် တနင်္ဂနွေကပုံမှန်ထက်ပိုရှည် လာမယ့်တနင်္လာနေ့ကတည်းကအားလပ်ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် App Store ကိုကြည့်ရှုရန်အချိန်တန်ပြီဖြစ်သည် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးဖျော်ဖြေမှုအသစ်တစ်ခုကိုရှာဖွေပါ ငါတို့ဒီရက်တွေအတွင်းညှစ်နိုင်တယ်။
ရှာဖွေခြင်း၏ပြsaveနာကိုဖြေရှင်းရန်ယနေ့ငါသည်သင်တို့၏စက်ရုပ်များ၊ ဂရပ်ဖစ်များ၊ မူရင်းမူရင်းများကြောင့်သို့မဟုတ်စိတ် ၀ င်စားစရာနှင့်ဖျော်ဖြေမှုသဘောသဘာဝကြောင့်သင့်ကိုစိတ်ဝင်စားစေနိုင်သောခေါင်းစဉ်များစွာကိုငါတင်ပြမည်။ အရာအားလုံးသည်အနည်းငယ်သာရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ဟေး၊ ငါတို့ဘာလို့စတာလဲ၊ အဆုံးမှာမင်းတို့ကိုငါတို့နဲ့မတူညီတဲ့အဆိုပြုချက်ကိုပြောမလား။
2 Gardenscapes - Acကအသစ်
"Realpolitiks" ငါထင်ခဲ့သည် စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးဂိမ်း တိတိကျကျပြောရရင်မင်းရဲ့အကြောင်းအရာကြောင့်လူတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်မှာမဟုတ်ဘူး။ အကြောင်းပါ အချိန်မှန်နိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာဂိမ်း အဲဒါကသင့်ကိုစစ်မှန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်လိုခံစားရစေလိမ့်မယ်။
En နိုင်ငံရေးနိုင်ငံရေး ခင်ဗျားဟာမျက်မှောက်ခေတ်ကမ္ဘာနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမယ် ထို့အပြင်သင်သည်နိုင်ငံ၏ပထဝီနိုင်ငံရေးနယ်နိမိတ်များနှင့်သက်ဆိုင်သောများစွာသောခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်ပြproblemsနာများကိုသင်ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်။
သင်သည်အကျပ်အတည်းများစွာကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပြီးသင်၏နိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာစွမ်းရည်၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့်စစ်ရေးတို့နှင့်သင်၏စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုစွမ်းရည်ကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ အကြမ်းဖက်ခြိမ်းခြောက်မှုများ၊ ဥရောပသမဂ္ဂပြိုကွဲမှု၊ တတိယကမ္ဘာစစ်၏အကျိုးဆက်များနှင့်အခြားအဖြစ်အပျက်များကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါသူတို့ကတကယ့်ကိုစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်ပါ။
မင်းမြင်တဲ့အတိုင်း နိုင်ငံရေးနိုင်ငံရေး စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုအဖြစ်ပုံဖော်နေတယ်၊ ၂၀ နှင့် ၂၁ ရာစု၏အခြေခံနိုင်ငံရေးစနစ်သုံးခုကိုအခြေခံသည်ဒီမိုကရေစီ၊ အာဏာရှင်စနစ်နှင့်အာဏာရှင်ဝါဒတို့ကြောင့်သင်ဟာပျော်စရာ၊ ဖျော်ဖြေမှုကိုသာမက၊ ကမ္ဘာ့ဇာတ်ခုံပေါ်တွင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုနားလည်ရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်သင်၏ရည်မှန်းချက်မှာ“ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကြီးစိုးမှုအတွက်အပြေးပြိုင်ပွဲကိုအနိုင်ယူရန်” ပင်ဖြစ်သည် သငျသညျအကျိုးဆက်များရှိလိမ့်မည်ဟုဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်ကိုယ်ကျင့်တရား, ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာနှင့်အမျိုးမျိုးသော။
နိုင်ငံရေးနိုင်ငံရေး ၎င်းသည် OS X 10.10 နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်အသုံးပြုနိုင်ပြီး Mac App Store တွင် ၂၄.၉၉ ယူရိုရှိသည်။
Gardenscapes - Acကအသစ်
ကျနော်တို့အစွန်းရောက်အလှည့်ယူ။ ငါရိုးသားဖို့, မူရင်းနည်းနည်းပေမယ့်ကြောင်း, ဂိမ်းတစ်ခုအဆိုတင်သွင်း တကယ်စွဲလမ်းခြင်းနှင့်ဖျော်ဖြေမှုစက်ပြင်ရှိပါတယ် ၎င်းသည် Mac နှင့် iOS နှစ်ခုလုံးအတွက်ဂိမ်းအမြောက်အများနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေခဲ့သည်။ ငါမိတ်ဆက်စက်ပြင်အကြောင်းပြောနေတာပါ Candy Crash Saga နှင့်ပါဝင်သည် အလားတူအစိတ်အပိုင်းများ align နှင့်ဖယ်ရှားလိုက်ပါ.
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, setting ကိုဥယျာဉ်တော်နှင့်ဇာတ်ကောင်, Austin, သင့် Butler ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဂိမ်းကမ်းလှမ်း ရာနှင့်ချီသောဇာတ်ကောင်များပျော်စရာလည်းကောင်းတယ်၊ ဒါကအခမဲ့ပါ.
Gardenscapes ၎င်းသည် OS X 10.9 သို့မဟုတ်ထိုထက်နောက်ကျပြီးသင့်အတွက်ယူရိုကုန်ကျမည်မဟုတ်ပါ။
ပွငျးစှာနှောငျ့ယှကျခွငျး အခြားဖြစ်ပါသည် ၁၉ ရာစုတွင်ယူနိုက်တက်စတိတ်ကိုသုတ်သင်ခဲ့သောရေနံအလွှာရှိစိတ် ၀ င်စားစရာဂိမ်းကစားခြင်း။ မင်းစဉ်းစားကြည့်နိုင်သည့်အတိုင်းသင်၏အဓိကရည်မှန်းချက်မှာအောင်မြင်သောရေလုပ်ငန်းစွန့် ဦး တီထွင်သူဖြစ်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းအတွက်သင့်လျော်သောမြေကိုရယူခြင်း၊ ထုတ်ယူခြင်းပလက်ဖောင်းများ၊ ပိုက်ကွန်များတည်ဆောက်ခြင်းမပြုလုပ်ဘဲ၊ အကယ်၍ သင်ငွေရှာချင်တယ်ဆိုရင်၊ မင်းရဲ့“ ရွှေရောင်” ကိုရောင်းရလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်အမြတ်အစွန်းကိုတိုးမြှင့်ပြီးပြိုင်ဆိုင်မှုကိုရင်ဆိုင်ဖို့မှန်ကန်သောနည်းဗျူဟာကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးရမည်။ ထိုအမှုအလုံးစုံတို့ကိုစဉ်အတွင်းမြို့တော်ဝန်ဖြစ်လာရန်ကြိုးစားနေစဉ်။
မငြိမ်မသက်မှုများသည် OS X 10.6 နှင့်အထက်နှင့်သင့်လျော်ပြီးယူရို ၉.၉၉
စနေ၊ တနင်္ဂနွေသည်အိမ်၏အသေးငယ်ဆုံးနှင့်လည်းဖြည့်ဆည်းရန်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤတိုတောင်းသောရွေးချယ်မှုများကိုကိုးကားခြင်းမပြုဘဲမပြီးနိုင်ပါ သူတို့ပျော်စရာရှိသည်ကိုတွေ့မြင်ရန်သင်ယူရန်ဂိမ်းတစ်ခု, သင်္ချာပွား.
၎င်းသည်ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအတွက်ကစားနည်းဖြစ်သည် သူတို့ကရယ်စရာပုံပြင်တွေကိုဖြတ်ပြီးများများပွားတတ်ဖို့သင်ယူပါလိမ့်မယ် သောဇာတ်ကောင်နံပါတ်များမှာ။
ဂိမ်းသည်ဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ အခမဲ့ဖြစ်ပြီးသင် (၄) စားပွဲနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အပိုင်းကိုအခမဲ့ရရှိမည်။ ယခုသင်နှစ်သက်ပါကဗားရှင်းအပြည့်ကိုဝယ်ယူနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » အားကစားပြိုင်ပွဲ » ဒီစနေ၊ တနင်္ဂနွေမှာပျော်စရာကောင်းတဲ့ဂိမ်းလေးခု
Apple Watch နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ရောက်ရှိလာသည့် Xiaomi WeLoop S3 ဖြစ်သည်